Sawirka Ninkii ka danbeeyey Qaraxii Hotel Shaamow (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sawirka Ninkii ka danbeeyey Qaraxii Hotel Shaamow (Sawiro)
Sawirka Ninkii ka danbeeyey Qaraxii Hotel Shaamow (Sawiro)
December 4, 2009 - By: Khalid Yusuf
Waxaa isa soo tareysa dhaliiceynta iyo eedeynmaha ku aadan kooxdii ka danbeysay Weerarkii shalay ka dhacay Hotel Shaamow oo ay ka dhaceysay munaasabad ay ku qalin jabinayeen Ardayda Jaamacada Banaadir.
Qaraxan ayuu ka danbeeyey nin naftii hure ah oo la sheegay inuu soo xirtay Dharka haweenka ama Jalbaab, ninkaasi oo halkaasi ku dilay 22 ruux oo ay ku jiraan 3 wasiir, arday, macalimiin, waalidiin iyo suxufiyiin ku sugnaa goobta munaasabada.
Ninkan la sheegay inuu weerarkan ka danbeeyey ayaa istaagay goob aan ka fogeyn meeshii ay fadhiyeen Wasiirada dowlada ka socday kadibna halkaasi isku qarxiyey xili bartamaha looga jiray khudbadihii ay halkaasi kasoo jeedinayeen macalimiinta iyo masâ€™uuliyiinta halkaasi lagu casumay.
Kooxda Al Shabaab oo ay dowlada ku eedaysay inay weerarkan ka danbeeyeen ayaa afhayeen uhadlay beeniyey in weerarkan ay ka danbeeyeen. Hase yeeshee kooxda Al Shabaab ayaa ah kooxda kaliya ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya gudaheeda oo horey u sheegatay weeraro noocaan oo ay fuliyey qof naftii hure ah.
HADDII AAD DOONEYSID SAWIRADA OO DHAMAYSTIRAN WAA DAAWAN KARTAA WAXAADNA KU DAAWAN KARTAA ADIGA OO RAALI KA AH OGAANSHANA U LEH IN SAWIRADU YIHIIN KUWO NAXDIN BADAN OO UURKUJIRTU BANAAN KA TAALOÂ HADDII AAD TAHAY QOF AAN ADKEYSI LAHAYN AMA DA’DAADU YARTAHAY HA ISKU BOOQANÂ DIB UGA NOQO
HALKAN RIIX SAWIRADA OO DHAMAYSTIRAN: WESBITEKA KUU SOO BAXAY KU QOR PASSWORDKA AHÂ Â shaamow
Tagged With: Qarax Muqdisho